DISTRIKAN’I TSARATANANA : Ankivivavy miisa 14 tratran’ny Ambalavelona
Ankizivavy miisa 14 no nitrangan’ny aretina Ambalavelona tao amin’ny sekoly Katolika iray any amin’iny Distrikan’i Tsaratanàna iny. 13 mars 2019
Saika ireo mpianatra ao amin’ny taona faha-7 ka hatramin’ny taona faha-9 avokoa ireto nitrangan’ity aretin’ity ireto. Nivara-hontsana ny iray fianarana sy ireo tompon’ andraikitra rehetra tao amin’ity sekoly ity raha nahita ity tranga ity ka voatery tsy maintsy natsahatra aloha ny fampianarana.
Na izany aza, tsy nojerem-potsiny ireto 14 mirahavavy tra-doza ireto fa nandraisana fepetra avy hatrany. Taorian’ny fampiatsoana ny ray aman-drenin’izy ireo dia nisy ny fiaraha-mivavaka nentina nanalana devoly sy nanadiovana azy ireto ka ray aman-dreny ara-panahy tao amin’ny sekoly niampy ireo mpanabe tao an-toerana no nanatanteraka izany. Tonga tany an-toerana nijery ifotony ity zava-niseho ity ihany koa ireo manam-pahefana any an-toerana izay notarihin’ny lefitry ny lehiben’ny Faritra sy ny pôlisy ao an-toerana.